I-40 ENTLE YOYILO LWESUNROOM (IMIFANEKISO) - IINGCAMANGO ZEGUMBI LOKUPHILA
Eyona Iingcamango Zegumbi Lokuphila I-40 entle yoyilo lweSunroom (Imifanekiso)
Wamkelekile kwigalari yethu yoyilo oluhle lwelanga enoluhlu olubanzi lweendlela zegumbi. Igumbi lokulala ilanga linokunceda ukuphucula ikhaya lakho kwaye likuvumele ukonwabele iindawo zangaphandle ixesha elide ukusuka kwinduduzo yangaphakathi. Njengomdibaniso phakathi kwegumbi lokuhlala kunye nepatio yokongezwa kwelanga kunokuba yindlela elungileyo yokunyusa ixabiso lokuthengisa kwakhona lendlu yakho kunye nokwenza indawo oya kuyonwabela nosapho lwakho.
Uninzi lwabantu alunakufumana ngokwaneleyo ilanga. Iphakamisa imimoya, isincede sifumane ukukhanya okukhanyayo kwelanga, kwaye inokwenza nokuba ezona ndawo zimnyama ekhaya zivakale zibanzi kwaye ziqaqambile. Kuyilo lwangaphakathi lwasekhaya, ukusebenzisa ukukhanya kwendalo-elona gama liqhelekileyo lisetyenziselwa ukukhanya kwemini- ayisiyiyo kuphela iinzuzo ezininzi zobuhle. Uphando lukwangqina ukuba ukukhanya kwemini kunexabiso elimangalisayo lezibonelelo zezempilo ngokunjalo.
Izibonelelo zamaSunrooms. Amagumbi elanga zizakhiwo ezidityanisiweyo ngaphakathi okanye ezahlulwe kwisakhiwo esingundoqo esinezinto ezimbini ezisebenzisayo- ukukhanya kwelanga kunye neembono. Zifumaneka rhoqo emakhaya, kodwa, njengoko siza kugquma kamva, ziyinxalenye yeofisi ezininzi, iivenkile zokutyela kunye nezinye izakhiwo.
Ama-Sunrooms amaXesha amaXesha ama-3 vs.
Iingcamango zeFenitshala yangaphakathi
Iingcamango zomgangatho welanga
Amagumbi okulala ekhaya
Amagumbi okulala ePatio
I-1960 yabona i-spike ebukhali kwiinkampani zokwakha ezibonelela ngeenkqubo zokuvalela iipatios kunye neepaki. Njengoko ubuchwepheshe bokwakha buqhubele phambili, igumbi lokugcakamela ilanga njengoko silazi namhlanje lavela kancinci. Igumbi lokulala ilanga langoku ngoku liza neendlela ezahlukeneyo zokwenza ifreyimu, iintlobo zeglasi, udonga kunye nezinto zokwenza imigangatho, kunye nokukhethwa kwempahla yesitayile.
Ixabiso leSunroom liyahluka ngokuxhomekeka kwizinto ezininzi. Amagumbi elanga aza kukuseta ubuyisele i- $ 360 efanelekileyo ngonyawo wesikwere. Oku kusebenza phantsi kwengcinga yokuba abachweli baya kubiza i-70 yeedola ngeyure, abasebenza ngombane baya kubiza i-65- $ 90 ngeyure, ngelixa abazobi beza kubiza i-20 ukuya kwi-40 yeedola ngeyure.
Ngolwakhiwo oluntsonkothileyo, kusenokufuneka uqeshe ezinye iingcali ezinje ngabaqulunqi bangaphakathi, abakhi bezakhiwo, okanye iinjineli. Gcina ukhumbula ukuba ngaphezulu kokuqeshwa kukwathetha iindleko eziphezulu. Eminye imimandla okanye izixeko ziya kufuna ukuba ufumane iimvume ezithile zokwakha amagumbi okugcakamela ilanga, ke kukho enye into ekufuneka uyiqwalasele.
Amaxabiso aphakathi ezakhiwo zokugcakamela ilanga ezigcweleyo ziya kubiza ngaphezulu kwe- $ 15,000. Ewe kunjalo, njengayo yonke imisebenzi yokwakha, indawo enkulu iya kuxhomekeka kuhlobo lwezixhobo kunye neenkqubo zokwakha onokukhetha kuzo. Ukuya kwinkqubo yokwenza iiplanga kunye ne-glazing iya kuba namaxabiso ahlukeneyo kunoko kuthiweyo, i-PVC okanye i-aluminium yokwenza ifreyimu.
Unokuhamba nezongezo zelanga zangaphambi kokuzenzela, nangona ekuqaleni zinamaxabiso aphezulu, ziya kuqinisekisa umgangatho, ngokuthe ngqo ukusuka kumzi-mveliso, kunye nezinto zokwakha zobugcisa kwaye ziya kuba nexesha elifutshane lokufaka. Ngalo lonke ukonga kwiiyure zomntu ezinokubakho kunye neendleko zokwakha kunye nezabasebenzi, ukwenziwa kwangaphambili kunokuba sisisombululo sezoqoqosho. Oku kuyakuxabisa malunga ne-22,000 yeedola.
Eminye imiba ekufuneka uyiqwalasele kukuba uza kuyongeza okanye hayi i-sunroom njengesakhiwo esiqhotyoshelweyo eludongeni esele likhona okanye njengokongezwa kwivaranda esele ikho okanye kumgangatho. Ukudilizwa kodonga kunye nokufakwa kwakhona kokulandelayo kuya kudla ixesha kunye nemali, kodwa kunokukunika igumbi lokugcakamela ilanga elinokulungela loo mzamo ungaphezulu.
Ukujonga ngokucacileyo ukhetho lwakho, umthetho olungileyo wesithupha uya kuhlala ucela uqikelelo. Buza kubasebenzi bakho basekuhlaleni, abayili, abathengisi, kunye neevenkile zehardware. Ukuziqonda kakuhle zonke iindlela onokukhetha kuzo kunokukunceda ubeke phambili eyona nto uyifunayo kwigumbi lokugcakamela ilanga, eliya kuthi emva koko likonge imali eninzi ekuhambeni kwexesha.
Amagumbi elanga anokuqokelelwa ngokwamaqela ngokokusetyenziswa kwawo ekujoliswe kuwo unyaka wonke.
Abanye babaninimzi banokukhetha ukusebenzisa amagumbi abo okulala elangeni kumaxesha amathathu aphezulu kwimozulu. Ubusika ngokubanzi bunzima kakhulu kwixesha lokusebenzisa i-sunroom, kwaye ke balungile ngokusebenzisa isithuba ngexesha lentwasahlobo, ihlobo, kunye neenyanga zokuwa. Amagumbi okulala elanga asetyenziswa kwezi nyanga zintathu zibutofotofo abizwa ngokuba ngama-sun-season amathathu.
Olunye uyilo lwelanga, kwelinye icala, lisebenzise iindlela ezifanelekileyo zokuthintela imozulu kunye neenkqubo ezisebenzayo nezingacacanga zeHVAC ukuyenza ukuba isetyenziswe ngabanini bamakhaya kunye neendwendwe zabo unyaka wonke. Aba babiziwe 4 amagumbi okulala elanga .
Umahluko ophambili phakathi kwezi ndidi zimbini zokulala kwelanga zilele kulawulo lwemozulu yazo - iintlobo zohlobo lwe-glazing abazisebenzisayo, ukugquma (okanye ukungabikho kwazo) iisilingi kunye neendonga, kunye neenkqubo ze-HVAC.
Uyilo lwelanga lwamaxesha amathathu, kuxhomekeke kubungakanani kunye nobunzima, luya kubiza malunga ne- $ 10,000 ukuya kwi-70,000 yeedola. Amagumbi okulala elanga angama-4, kunye nokuyilwa okungqongqo kwemozulu, aya kubiza imali eyongezelelweyo kwi-20,000 ukuya kwi-100,000 yeedola.
Ukukhethwa kwefanitshala yamagumbi elanga kuya kuthi, njengazo zonke izithuba eziyiliweyo, kuxhomekeke kusetyenziso olucetywayo.
Ngokwesiqhelo, amagumbi okulala elangeni asetyenziswa njengendawo yokuhlala yeendwendwe. Kwiimeko ezinje, iisofa kunye nezitulo zokuphumla, iitafile ezisecaleni kunye neetafile zekofu zihlala zinokubonakala ngathi zihombisa igumbi - eyona nto ibalulekileyo yeendawo zokuhlala zangoku.
Amagumbi elanga eofisi, ukhetho oluthandekayo lwezihlalo zengalo kunye needesika zomsebenzi ziya kulindeleka. Kumagumbi okudlala okanye elounge, iibhedi zasemini kunye neendawo ezinomgangatho ofakwe iikhaphethi zihlala zisetyenziswa ngokunjalo.
Nokuba ikhetha ntoni ifanitshala, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ethe chatha ekuqinisekiseni ukuba izinto zefanitshala zingathatha ukukhanya kwelanga kwigumbi lokuhlala ilanga. Zama ukuphepha nayiphi na imithi, iipeyinti, okanye ezinye izinto ezinokuthi zibe nempendulo engalunganga elangeni.
Ngamanye amaxesha, ukuvela kombala kunye nokudodobala kwezinto kwenzeka ngenxa yemitha ye-UV. Indawo efanelekileyo yokusebenzela kwezi ntlobo zezixhobo zigqityiwe ukutyabeka i-UV okanye iifestile ezinamandla okukhusela i-UV.
Uyilo lwendlela egudle ulwandle ngesofa kunye nemiqamelo yokuhombisa
Iifenitshala zelanga zinika isandi esongezelelekileyo kwisithuba ngokunikezela ngesimilo kunye nesimbo sobugcisa. Uyilo lwelanga eliselunxwemeni lisebenzisa iisofa zokuluka kunye nezitulo zokuphumla kunye nokukhanya okuqaqambileyo okubomvu kunye neorenji etyebileyo kwimiqamelo yokuphosa kunye nesigqubuthelo sengubo yokulala.
Njengendawo yangaphakathi kodwa kwakhona, ngandlel 'ithile, indawo yangaphandle, amagumbi okugcakamela ilanga anelungelo elikhethekileyo lokuba yenye yeendawo ezimbalwa ezikhethiweyo ezinokuhlala phantse kulo naluphi na uhlobo lokugqitywa komgangatho. Kuxhomekeke kuhlobo lwenkqubo yangaphantsi kunye nolwakhiwo, umntu unokukhetha ukusebenzisa iithayile zelitye, iithayile zeceramic, umgangatho wokhuni, okanye ikhaphethi.
Ngeemfuno zomgangatho olula, ukongezwa kwelanga kuyakufuna ukulungiswa kwendawo encinci ngaphambi kokuba kwakhiwe. Kwimigangatho enzima kakhulu okanye efuna ukwakhiwa njengamatye anzima okanye axineneyo amatye okanye iibhodi zomgangatho oqinileyo zomthi, iizilebhu zesiseko okanye iinkqubo zokudibanisa imigangatho kunokufuneka.
Njengokhetho lwefenitshala, gcinani engqondweni ubuninzi bobushushu kunye nemitha ye-UV igumbi liya kuba selangeni.
ukuba ufuna ukuba nguwe ingoma
Uninzi lwabanini bamakhaya abanamabhongo okuphucula amakhaya, ukongezwa kwelanga kukhetho oluthandwayo ekuphuculeni ngokwenene ixabiso lendawo yokuhlala.
Ngokwesiqhelo, izongezo ezinje ngezi ziyongezwa kwiidesika esele zikhona, iivaranda, okanye iilana. Nangona kunjalo, akuqhelekanga ukubona ukongezwa kwelanga okwenziwe emhlabeni. Kuyavunywa, kuya kubakho iindleko ezingaphezulu zokuqwalaselwa kweenkqubo zomgangatho, ukudilika okunokubakho kudonga, kunye nokulungiswa kwezithuba ezikhoyo ezikhoyo, kodwa ubukhulu becala, intuthuzelo eyongezelelweyo kunye nendawo evela kwigumbi elitsha lelanga kufanelekile ukuba ibhajethi eyongezelelweyo.
Uyilo lokongezwa kwelanga lisebenzisa ngokupheleleyo ubuhle balo bemvelaphi ngokukhetha ukuhamba neglasi egcweleyo kuzo zonke iindonga kunye nenxalenye yophahla lwayo. Ukusetyenziswa okuninzi kwezinto eziluhlaza kunokubonwa kwigumbi ngokwalo, kunye nezihlahla, iintyatyambo ezinamanzi, kunye nezityalo zangaphakathi ezisetyenziselwa ukuhombisa indawo.
Izongezo zegumbi lokulala zingasetyenziselwa ukuvalwa kunye nokugutyungelwa iiplanga, ngazo zonke izinto eziluncedo nakweyiphi na iplanga elingaphandle elinamaplanga. Apha sinesofa yokujikela ezimeleyo, efanelekileyo yokuhlala ujikeleze ngenjikalanga yangeCawa enobuvila nosapho. Ngaphandle kokuncama iimbono ezimangalisayo, iiglasi zelanga ezigqunyiweyo zigcina naziphi na izinto zendalo ezingafunekiyo okanye izinambuzane zingonakalisi usuku lwakho.
Umntu unokukhetha ukujonga okwangoku ngokuya kwi-sleeker, ukhetho lwefenitshala yanamhlanje kunye neepeyinti zombala ezi-somber. Ukongezwa kwelanga elimnyama nelomhlophe kukwaqeshisa nokuhamba okumhlophe okumhlophe ngesixa esaneleyo semfihlo xa kufuneka njalo.
Iimfama zeRoller zikwasebenza ngokumangalisayo kumagumbi elanga. Oku kupholileyo, ukuthatha ubuqu okongezelekileyo kwigumbi lokungena elangeni kunee roller ezijikelezayo ezisathatha ukukhanya kwelanga kwendalo nokuba sele ziwile ngokupheleleyo.
Amagumbi elanga anokongezwa kufutshane neendawo esele zikho zasekhaya. Lo mzekelo uthile uvule iveranda enkulu ejonge umbono ophefumlayo wesixeko nolwandle.
Ukusebenzisa imibala eqaqambileyo, engathathi hlangothi kuyanceda ekuncediseni ukukhanya kwendalo ngokwendlela yegumbi lokuzivalela livulekile kwaye libanzi. Esi sithuba sasekhaya sisebenzisa iithoni ezityheli ezingaphantsi ezimhlophe kunye nomhlaba omdaka omnyama kwifenitshala, iindonga kunye neefestile.
Ii-sunroofs zezolongezo olukhulu kulo naluphi na uyilo lwelanga. Esi sithuba sisebenzisa iingcango kunye neefestile ezintle zaseFrance, isilingi yecawe yecawe enee-sunroofs ezilinganayo zokukhanya kwelanga, kunye nodonga oluhle lodonga lwezitena kwelinye icala legumbi.
Amakhaya akwiindawo ezinamahlathi amaninzi okanye amahlathi axhamla lukhulu kumagumbi elanga. Bafumana umbono olungileyo ngelixa besebenzisa isithunzi sehlathi lendalo ukulawula ubungakanani belanga eliza ekhaya.
Ngokwakhiwa komhlaba kwelanga, ukhetho oludumileyo kukusetyenziswa kweekiti zelanga ezihleliweyo. Nangona ixabiso lixabiso elincinci kunokwakhiwa kwesiza, izixhobo zelanga ezibonelela ngazo zonke izinto ezilungileyo, ezivavanyiweyo kwimizi-mveliso kunye neenkqubo zokuvalelwa, kunye nokuqhayisa amaxesha angaphantsi kokufakwa kunakwindawo yokwakha.
Uninzi lwezi kitshi zelanga ziyi-DIY, ikunika ithuba lokuzakhela ukuze ugcine iindleko zomsebenzi.
Ulwakhiwo-lokwakha yinto enkulu kuyilo lwezi khithi. Basebenzisa izinto ezinokubanjiswa ngokulula kunye nezinto zokwakha ezinje ngePVC okanye izakhelo zealuminium. Ezi zinto zilula zokuyila zingumoya wokwakha kunye nokufaka kodwa zikwabonelela ngenkxaso eyomeleleyo kunye neyolondolozo olusezantsi kwiifestile nophahla lwelanga.
Ixesha lokwakha ngokukhawuleza kunye nobunzima bokukhanya kodwa ulwakhiwo olusebenzayo zizizathu ezimbalwa abaninimzi abanokuthi bacinge ngokuya kwiikiti zelanga zokulungiselela kwangaphambili.
Ikhithi yelanga enefestile yegreenhouse-Umthombo
Uninzi lweekiti zegumbi lokulala ilanga zinokufakwa kwimimandla esele ikho, iibhalkhoni, okanye iirandas ukuze zisebenze kakuhle. Ukucwenga kwabo kunye neentlobo zeglasi ezisetyenziswayo zihlala zenza iziphumo zegreenhouse kwaye zinokusetyenziswa njengeenkqubo zokufudumeza ekhaya.
Ezi khithi zegumbi lokulala ilanga ziza ngobukhulu obahlukeneyo-ukusuka kwincinci encinci ngo-8 ngo-8 'ukongezwa kwiindawo eziphakathi nezikhulu. Iimpawu zabo zeemodyuli azilungelanga kuphela, kodwa ngokumangalisayo ziyahlukahluka phantse kuzo zonke iintlobo zeemfuno zelanga.
Eyona ndawo ixhaphakileyo yokusebenzisa amagumbi okulala elangeni njengokonwaba okanye indawo yokuphumla yabanini bamakhaya kunye neendwendwe zabo. Kananjalo, ukusetyenziswa kwelanga kuyahluka ukusuka kwindawo zokuhlala ukuya kwiindawo ezincinci zokutyela, iindawo zokuphumla ukujonga iidesika, kunye namagumbi okudlala kwiindawo ezimnandi zokufunda.
Amagumbi okuhlala amakhulu amakhulu kunye nobukhazikhazi asebenza njengamagumbi okuhlala aphambili okanye iindawo zokuhlala iindwendwe zendlu. Lo mzekelo unendawo yokubasa umlilo kwisithuba.
Uyilo lwelanga elunxwemeni nefenitshala eluhlaza namhlophe-Umthombo
Abanini bamakhaya kunye nabaqulunqi banokukhetha ukwenza ubuchule kunye nesitayile okanye incasa ye-aesthetics kumagumbi elanga asekhaya. Isitayile sonxweme esine-navy eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nemibala emhlophe zizinto ezithandwayo kumagumbi amaninzi okuhlala elangeni.
Kwiindawo zokuhlala elwandle, kuya kuba lihlazo ukungazisebenzisi iimbono ezimangalisayo zeli chibi kunye namahlathi ajikelezileyo. Amagumbi elanga amakhulu ecaleni kweendawo ezintle ezinjalo enza kakuhle ukusebenzisa iifestile ezinkulu kunye neendawo zokucoca ulwandle ukuze athathe indawo yokuma komhlaba.
Ngexesha lobusika, onke amaxesha onyaka okanye ama-4-amagumbi okulala elanga asetyenziselwa ukuthatha ubushushu kunye nokukhanya elangeni kunye nokukunika umbono olungileyo wekhephu elihle elijikelezileyo.
Iimozulu ezingaphezulu zetropiki zinika ubushushu obungcono kunye nokukhanya kumagumbi elanga afana nala. Ukukhethwa kokusebenzisa ifenitshala yokuluka i-wicker kunye neetafile zerustic zomthi kukongeza ukubamba okuhle kwigumbi.
Uyilo lwangoku lwe sunroom ngesofa kunye nezitulo ngamanye amaxesha-Umthombo
Izitayile zangoku zokulala zinokusetyenziswa kwigumbi lokuhlala elinamhlanje. Ifenitshala yale mihla kwaye intofontofo kule ndlu yelanga enesitayile iyayenza indawo.
Umgangatho ofakwe ipetroli unokuba yindawo entle yokuthambisa kumagumbi okugcakamela ilanga. Yenza umoya ococekileyo kunye nokwamkela kunye nokongezwa kwefenitshala ye-wicker kugcwalisa ukuziva ekhaya ngokubanzi kwendawo.
Ukomelela, ukutyeba kokugqitywa kwamaplanga kunokongeza ukukhanya okumnandi kulo naliphi na igumbi lasekhaya lasekhaya. Iifreyimu ezimhlophe zeefestile zaseFrance kunye neengcango kunye nepateni emxinwa yomgangatho wethayile emhlophe ikwabonelela ngokungafaniyo okumdaka kunye neetoni zelo gumbi.
Ukucoceka, ukugcwala okumhlophe kuya kuhlala kuhamba kakuhle ngeethoni zomthi ezomeleleyo. Izitulo ze-wicker lounge kunye netafile egxile embindini zijolise kulwakhiwo olusebenzayo lweradial, lenza eli gumbi lelanga libe yindawo efanelekileyo yokuncokola nabahlobo.
Iipatioside ezinamachibi zinokwenziwa ukuba zisetyenziswe nangakumbi ngokongeza isibonelelo esongezelelweyo sokugutyungelwa kwamagumbi elanga. Ikwabonelela abaninimzi isithuba sokuma emva kokuntywila kakuhle echibini.
Indawo eyongeziweyo yesilingi eyongezwe kumagumbi elanga inceda ukulawula ubushushu begumbi ngokuvumela umoya oshushu ukuba unyukele phezulu. Olu seto oluthile, kunye neefestile ezinkulu zefrentshi kunye nokuseta kwefestile yokucoca iifestile kukuvumela ubungakanani obufudumeleyo bokukhanya kunye nokukhanya.
Uhlobo lwelizwe loyilo lwelanga ngefenitshala ye-rattan-Umthombo
Umntu unokukhetha ukuvumela amagumbi okugcakamela ilanga asebenze njengendawo yokungena esecaleni okanye ekungeneni ngasemva kwendlu. Isebenza njengendawo entle yotshintsho phakathi kwendlu engaphandle kunye neendawo zangaphakathi zabucala zokuhlala.
Uyilo lwegumbi lokulala nelanga linokuba ngamaphiko ongezelelweyo kwiindawo eziphambili zendlu; Banokusebenza njengeendawo zokuphumla ezizitofotofo kunye nokubukela iidesika. Isitayile salo mzekelo, kunye nesingqengqelo esikhulu esimile okwe-L kunye ne-ottoman esembindini, yenza ukuba izive ikhuphukile kwaye iyilwe kakuhle.
Igumbi lokulala elinde lophahla labantwana - Imvelaphi
Ngaphandle kwamagumbi okuhlala, amagumbi okuhlala elangeni angasebenza njengeendawo ezibonelela amalungu asekhaya amancinci. Ukuvumela abantwana badlale kwigumbi lokudlala elangeni kunye nezinto zabo zokudlala kunye neebhedi zemethi zerabha zibanceda ukuba bangene kwilanga elisempilweni lokukhanya kwelanga kwaye bancede abantwana bazive bekhululekile kwaye benomoya ophakamileyo.
Igumbi elimhlophe elinemibono yegadi- Imvelaphi
Igumbi lokuhlala ilanga lisebenza njengendawo entle yokujonga igadi engasemva kwendlu. Ivula ngokuthe ngqo kwipaseji yangaphandle ekunika i-vista entle yeentyatyambo eziyingqongileyo kunye nokulungiswa komhlaba.
Igumbi lokuhlala elangeni elineesofa eziluhlaza namhlophe - Imvelaphi
Izitayile zelanga zonxweme ziziva zisekhaya, njengoko igama lisitsho, kwizindlu ezingaselunxwemeni. Iiphalethi zemibala eluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe ezihlala zithandwa zinee hues ezihambelana nembonakalo entle yolwandle nolwandle.
Igumbi lokulala elincinci elinesihlalo sefestile yekona- Imvelaphi
Igumbi lokulala elincinane elinesihlalo sefestile sembombo sigqibelele kulowo unokukhetha ukusisebenzisa njengendawo ethambileyo yokufunda ii-nooks okanye njengendawo yokuphumla esondeleyo. Ezi zihlalo zikunika iimbono ezintle zangaphandle kwaye zilungele ukuhlwa kuphela kunye neengcinga zakho.
Amagumbi elanga asekhaya anokusebenza kakuhle njengeendawo zokutyela ngokunjalo. Oku kufanelekile kwiintsapho ezikhetha umbono omnandi ojikelezileyo ngaphandle xa besitya isidlo sakusasa okanye isidlo sangokuhlwa.
Amagumbi okulala ilanga ePatio azinikezelwe kwiindawo zokulala okanye zokuhlalisa iindwendwe. Ezi ziza ngohlobo lwezakhiwo ezahlukeneyo kwindlu zizonke okanye izandiso zephiko ezisecaleni ezineendawo ezinkulu zomgangatho.
Ezi ntlobo zamagumbi elanga zihlala zinophahla oluntsonkothileyo kunye noyilo lophahla. Uninzi lwazo lusebenzisa iiphaneli zeglasi ezifihliweyo okanye ezisezantsi ze-E ukuvumela ukukhanya okuninzi ngangokunokwenzeka ngelixa kugcinwa imitha ye-UV. Abanye basebenzisa iisilingi eziphakamileyo okanye ezenziwe ngamaplanga ngexabiso lobuhle kunye nendawo yomoya.
Amagumbi elanga egadi patio yindlela emangalisayo yokonwabisa kunye nokuhlalisa iindwendwe okanye iindibano zoluntu ezisenyongweni. Indawo ngokwayo sisiqwengana esihle sencoko kuye nawuphi na umninikhaya.
Iglasi efihliweyo iqhele ukusetyenziselwa nakuphi na ukuyilwa kwelanga kwipatio enokuthi ifune ukusebenzisa i-glazing njengezinto zokuphahla. Ivumela ubungakanani obufanelekileyo bokukhanya kunye nobushushu ngokweemfuno zekhaya lakho.
Igumbi lokuhlala elinefenitshala e-wicker kunye netafile yeenkuni-Umthombo
Ukufakwa kweefayili, i-slate phantsi, kunye neendawo zokutshisa amatye zilungele i-patio zelanga ze-4. Ezi zisebenza njengokuphefumla okuncinci okubandayo kwingqele yasebusika, ngelixa ikunika umbono omangalisayo macala onke.
Uhlobo oluthile lwe-slope lophahla lwophahla kunye neglasi ebonakalayo ebonakalayo njengoko izinto zokuphahla zifanelekile kwiindawo zokulala zelanga ezihamba phambili kwiindawo ezinamahlathi okanye izitiya. Ngomthunzi owongezelelweyo obonelelwa luhlaza, ukuthatha ukukhanya kwelanga kakhulu akufuneki kube yingxaki.
Igumbi lokuhlala elinefenitshala emhlophe
Uphahla lwendlu ende yetehedral, ifanitshala eqaqambileyo nenobuhle kunye nefenitshala, kunye neembono ezintle ezivela kwiifestile zemifanekiso ezijikelezeyo zihlala ziyindibaniselwano emangalisayo kuyo nayiphi na indawo yokulala ilanga yepatio.
Uninzi loyilo lwegumbi lokulala ilanga lenze kakuhle ukuba lixhumeke ngqo kwigumbi lokuphumla elingaphandle okanye kwiindawo zokutyela. Ukusondela kwezithuba ezinxulumene noko kuyinxalenye yoyilo lobume beliphi na ikhaya.
Nangona zihlala zisetyenziswa njengeendawo zokuhlala, amagumbi okuhlala elanga ahlala esetyenziselwa ukusebenza okanye amagumbi eofisi. Amagumbi elanga aluncedo ngokukodwa kwidesika enokuthi ifune ukukhanya okuninzi kwendalo. Kwelinye icala, iimbono ezilungileyo zangaphandle kunye nokuvula okuvulekileyo, umoya womoya wenza imimangaliso kuwo nawuphi na umsebenzi wemveliso kunye nokuba sempilweni kwabasebenzi.
Esinye isibonelelo esihle seofisi yasekhaya egumbini lokusebenzela kukukwazi ukuyiguqula ngokukhawuleza ukuba ibe kwiofisi ephindwe kabini. Uyilo lwegumbi lokuhlala linendawo yokuhlala evumela umntu ukuba amise indawo yokusebenza kuyo enye okanye ezimbini zeendonga zasimahla. Olu luhlu lulungele izibini ezabelana ngeofisi okanye ezinqwenela indawo entsha yokucamngca okanye umsebenzi wokuyila.
Ukuvula, ukusebenzisa ilanga emini kwiiofisi zegumbi kulungele ukulungiselela naziphi na iindwendwe zeofisi xa intuthuzelo kunye nokuphumla kubalulekile. Imeko yokwamkela ihlala iluvo olulungileyo xa uxoxa ngethemba lokushishina.
Uninzi lweentlobo zokuyila ziyaluthanda uncedo olufanelekileyo lwangaphandle xa usebenza. Izicwangciso ezinkulu ezivulekileyo ezisetyenziselwa iiofisi zelanga ezifana nale zikwanomdla omangalisayo wokuyila umsebenzi kwaye zivumela amagcisa ukuba avelise konke okusemandleni.
Ukuthotyelwa, uyilo oluncinci olunokubaluleka kuluncedo nakwiiofisi zasekhaya ezimiselwe njengoyilo lwelanga. Kuhlala kumnandi ukuba ne-nook encinci kwindawo enelanga elininzi lomsebenzi wedesika ofuna ukugxila kunye nokuqwalaselwa.
Igumbi lokuhlala eliDibeneyo onokulithanda:
Iingcamango zelanga - Iingcamango zeSihlalo seWindows - Amagumbi okuPhila noMgangatho oLukhuni - Amagumbi okuPhila amahle
I tattoos zomtshato kumnwe womsesane
Isipho seminyaka eli-11 somtshato somyeni
are jim and pam utshatile nyani
Isithembiso amakhonkco kwizibini ezinentsingiselo
plus ubungakanani bomama wesuti yomtshakazi